အအေးဗူးတွေ ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ – Alanzayar
အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသင့်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်။ တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ရူးကြောင်ကြောင်သတင်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ ဘယ်လိုမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ မိသားစု အကုန်လုံး soda ဘူးဖောက်သောက်ရင်းအဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်ပြီး
သေသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုပြောပြချင်တာက တကယ်သေနိုင်လား? မသေနိုင်ဘူးလား?မသေဘူးဆိုရင်ကောဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လည်း? ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်သင့်သလည်း?ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားဖြေကြတာပေါ့။အိမ်ကနေအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သံဘူးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အအေးတွေ၊ဆိုဒါတွေ၊ဘီယာဘူးတွေကိုသောက်တဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောက်ဖြစ်ကြပါသလား?မဖောက်သောက်ခင်တုန်းက မသန့်ရှင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီး မျက်နှာပြင်
တဝိုက်ကို Tissue နဲ့သုတ်မိကြပါသလား?အဲ့လောက်နဲ့သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် အဖြေတွေကိုအောက်မှာ
ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။သံဘူး တွေအကုန်လုံးကို စက်ရုံ ကနေထုတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ်
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေမတက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်းဘဲ စူပါမားကတ်တွေကိုပို့ဆောင်ပါတယ်။သံဘူးတွေဟာ စူပါမားကတ်တွေရဲ့
အရောင်းစင်တွေမှာရက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေတာကြောင့် အချို့သောဖုန်တွေတက်နေနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် မသောက်ခင်မှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ကတော့
သံဘူးတွေအရမ်းညစ်ပတ်နေလို့ဆိုပြီး ဆပ်ပြာမှုန့်တွေသုံးပြီးတိုက်ချွတ်ဆေးကြောတာကတော့ လုံးဝမလိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ နောက်တစ်ခါ သံဘူးတွေကို ဖွင့်သောက်တော့မယ်ဆိုရင်အခုပြောမယ့်အချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။
– သံဘူးက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနေအထားနဲ့ရှိနေသလားဆိုတာကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ သံချေးတက်နေလား?ပျက်စီးနေလား?ပိန်ရှုံ့နေသလား?
– သံဘူးဟာဖောင်းကြွနေတယ်ဆိုရင်တော့ မသင့်တင့်တဲ့ ပိုးသတ်နည်းကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ညစ်နွမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်/ အကယ်၍များ သံဘူးရဲ့ဘေးမှာ အပေါက်သေးသေးလေးတွေရှိနေတာကြောင့်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– ပျက်စီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ အတွင်းပိုင်းကအရာတွေဟာအရည်တွေနဲ့သတ္ထုတွေကိုပေါင်းစပ်သွားစေနိုင်တာကြောင့် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ သတ္ထုကသာ သံချေးတက်နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီသံချေးဟာအရည်တွေနဲ့ရောသွားပြီး မသောက်သုံးသင့်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ အကြံဉာဏ်ရိုးရိုးလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိသမျှကိုအလုံးစုံယုံစရာမလိုပါဘူး။ အခုအကြောင်းအရာလည်းအပါအဝင်ပေါ့။ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်ကကို အဲ့ဒီသံဘူးတွေဟာစတိုးဆိုင်တွေ စတိုခန်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသိမ်းဆည်းခံထားရသလည်းဆိုတာကို မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အသုံးမပြုခင်မှာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးမှသောက်သုံးတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။
နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ တခြားပုလင်းထဲ(သို့)ခွက်တခုခုထဲကိုတဆင့်ပြောင်းလဲပြီးမှ သောက်သုံးတာလည်းအကောင်းဆုံးဘဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
Previous Article ခရိုနီတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီးနေရတဲ့ မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောက်တရား
Next Article အမေစုရှေ့နေတွေကိုလုပ်ကြံလိုက်တဲ့စကစ၏ယုတ်မာမှုကြီး